Sazy avo roa heny: ny angano, ny zava-misy ary ny torohevitro | Martech Zone
Alakamisy 24 martsa 2022 Alakamisy 24 martsa 2022 Douglas Karr
Nandritra ny folo taona mahery, Google dia niady tamin'ny angano momba ny sazy mihatra amin'ny duplicate. Satria mbola manohy mametraka fanontaniana momba izany aho, dia nieritreritra aho fa mendrika hodinihina eto. Andao aloha hodinihintsika ilay verbiage:
Inona ny Votoatin'ny duplicate?
Ny atiny duplicate amin'ny ankapobeny dia manondro ireo votoatin'ny votoatiny anaty na manerana ireo domains izay mifanandrify tanteraka amin'ny atiny hafa na izay mitovy tokoa. Ny ankamaroany dia tsy mamitaka amin'ny fiaviany.
Google, Sorohy ny atiny misy duplicate
Inona ny sazy mihatra amin'ny duplicate?
Ny sazy dia midika fa ny tranokalanao dia tsy voatanisa ao amin'ny valin'ny fikarohana intsony, na nahena be ny pejy misy anao amin'ny teny lakile manokana. Tsy misy. Vanim-potoana. Google nanala an'io angano io tamin'ny 2008 nefa ny olona mbola mifanakalo hevitra momba izany na dia ankehitriny aza.
Andao hapetraka eo am-pandriana indray mandeha izao, ry havana: tsy misy izany antsoina hoe “sazy mihoa-pampana.” Farafaharatsiny, tsy araka ny hevitry ny ankamaroan'ny olona rehefa miteny izany.
Google, Demystifying ny sazy mihoa-droa
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fisian'ny atiny duplicate ao amin'ny tranokalanao dia tsy hanasazy ny tranokalanao. Mbola afaka miseho amin'ny valin'ny fikarohana ianao ary mbola milahatra tsara amin'ny pejy misy atiny duplicate.
Fa maninona no tian'ny Google ianao hisorohana ny atiny avo roa heny?
Google dia mila fanandramana mpampiasa ambony ao amin'ny Search Engine izay ahitan'ny mpampiasa fampahalalana sarobidy isaky ny tsindry valin'ny karoka. Ny atiny avo roa heny dia hanimba an'io traikefa io raha toa ka ny valiny 10 ambony amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP) nanana atiny mitovy. Mety hahasosotra ny mpampiasa izany ary ny valin'ny motera fikarohana dia ho lanin'ireo orinasa SEO blackhat izay manangana toeram-piompiana votoaty hanjakan'ny valin'ny fikarohana.
Ny atiny avo roa heny amin'ny tranokala dia tsy antony hanaovana hetsika ao amin'io tranokala io raha tsy hoe hita fa ny tanjon'ny atiny dika mitovy dia ny hamitaka sy hanodinkodinana ny valin'ny motera fikarohana. Raha mijaly noho ny olana amin'ny atiny duplicate ny tranokalanao… manao asa tsara izahay amin'ny fisafidianana kinova amin'ny atiny mba haseho amin'ny valin'ny fikarohana anay.
Google, Fadio ny famoronana atiny avo roa heny
Ka tsy misy sazy izany ary hisafidy kinova haseho i Google, dia maninona ianao no tokony ialao ny atiny avoaka? Na dia tsy voasazy aza ianao, ianao mety mbola mandratra ny fahafahanao milahatra tsara kokoa. Izao no antony:
Google dia azo inoana fa handeha mampiseho pejy tokana amin'ny valiny… Ilay manana fahefana tsara indrindra amin'ny alàlan'ny backlinks ary avy eo hanafina ny ambiny amin'ny valiny. Vokatr'izany, ny ezaka apetraka amin'ny pejy atiny dika mitovy hafa dia fandaniam-poana fotsiny raha ny amin'ny milina fikarohana.
Ny laharan'ny pejy tsirairay dia miankina betsaka amin'ny backlinks mifandraika amin'izy ireo avy amin'ny tranonkala ivelany. Raha manana pejy 3 manana atiny mitovy (na lalana telo mankany amin'ny pejy iray ianao) dia mety manana rohy miverina amin'ny pejy tsirairay ianao fa tsy ny rohy rehetra mankany amin'ny iray aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mandratra ny fahafahanao manana pejy tokana ianao manangona ny rohy rehetra sy ny laharana tsaratsara kokoa. Ny fananana filaharana pejy tokana amin'ny valiny ambony dia tsara lavitra noho ny pejy 3 amin'ny pejy 2!
Raha lazaina amin'ny teny hafa… raha manana pejy 3 misy atiny misy duplicate aho ary samy manana ny rohy miisa 5 avy ny tsirairay amin'izy ireo… tsy ho laharam-pahamehana izany na pejy tokana misy rohy miisa 15! Ny atiny avo roa heny dia midika fa mifaninana ny pejinao ary mety handratra azy rehetra fa tsy hanao pejy iray tsara sy kendrena.
Saingy manana atiny misy duplicate ao anaty pejy izahay, ankehitriny ahoana ?!
Ara-dalàna tanteraka ny fananana atiny duplicate ao anaty tranokala. Ohatra, raha orinasa B2B aho izay manana serivisy miasa manerana ny indostria maro, dia mety manana pejy lasibatra eo amin'ny indostria ho an'ny serivisiko aho. Ny ankamaroan'ny famaritana an'io serivisy io, tombontsoa, ​​fanamarinana, vidiny sns ... dia mety hitovy avokoa amin'ny pejy indostria iray mankany amin'ny manaraka. Ary misy dikany tanteraka izany!
Tsy mamitaka ianao amin'ny fanoratana atiny mba hamoronana azy manokana ho an'ny personas samihafa, tranga azo ekena tanteraka izany duplicate content. Ity anefa ny torohevitro:
Mampiasà lohateny manokana - Ny lohatenin'ny pejiko, mampiasa ny ohatra etsy ambony, dia ahitana ny serivisy sy ny indostria ifantohan'ny pejy.
Mampiasà famaritana Meta pejy tsy manam-paharoa - Ny famaritako ny meta dia tsy manam-paharoa sy lasibatra ihany koa.
Ampidiro atiny tsy manam-paharoa - Na dia azo atao dika mitovy aza ny swaths lehibe an'ny pejy, ampidiriko ao anaty lohateny, sary, sary, horonan-tsary, fijoroana vavolombelona, ​​sns, ny indostria mba hahazoana antoka fa tsy manam-paharoa sy kendrena ho an'ny mpihaino kendrena ilay orinasa.
Raha manome indostria 8 amin'ny serivisinao ianao ary mampiditra ireo pejy 8 ireo amin'ny URL tsy manam-paharoa, lohateny, famaritana meta, ary ampaham-bola marobe (ny tsinaiko tsy misy data dia 30%) amin'ny atiny tsy manam-paharoa, tsy hihazakazaka ianao mety hisy ny fieritreretan'i Google fa manandrana mamitaka olona ianao. Ary, raha pejy namboarina tsara misy rohy mifandraika… dia mety hanana laharana tsara amin'ny maro amin'izy ireo ianao. Azoko atao koa ny mampiditra pejy ho an'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny topy maso izay manosika ny mpitsidika ny takelaka isaky ny indostria.
Ahoana raha miovaova fotsiny ny anaran'ny tanàna na ny faritany noho ny tanjon'ny jeografika?
Ny sasany amin'ireo ohatra ratsy indrindra amin'ny atiny duplicate hitako dia ny toeram-piompiana SEO izay mandray sy mandika pejy isaky ny toerana jeografika misy ny vokatra na serivisy. Niara-niasa tamin'ny orinasa roa tafo aho izao izay nanana mpanolo-tsaina SEO teo aloha izay nanangana tanàna am-polony- pejy centric izay nosoloin'izy ireo fotsiny ny anaran'ny tanàna tamin'ny lohateny, ny famaritana meta ary ny atiny. Tsy mandeha izany… nalahatra daholo ireo pejy ireo zara raha.
Ho solony, nametraka footer iraisana aho izay nanisy lisitra ireo tanàna na faritany notompoin'izy ireo, nametraka pejin'ny faritra misy ny saritany misy ny saritany ny faritra izay notompoin'izy ireo, nanitsy ny pejin'ny tanàna rehetra ho an'ny pejin'ny serivisy… ary nampiroborobo… ny serivisy pejy sy pejy fandraisan'anjaran'ny serivisy dia samy nisondrotra tamin'ny laharana.
Aza mampiasa scriptes tsotra na toeram-pambolena atiny fanoloana soloina teny tokana toa izao… mangataka korontana ianao nefa tsy mandeha. Raha tafo mitafo tanàna 14 aho… aleoko manana rohy miverina miverina miresaka momba ny tranokalam-baovao, tranokalan'ny mpiara-miombon'antoka ary tranokala manondro ny pejiko tokana mitafo. Hahatonga ahy hanana laharana izany ary tsy misy fetrany ny isan'ireo teny fanalahidin'ny tolotra serivisy azoko atao amin'ny pejy tokana.
Raha afaka manao script amin'ny toeram-pambolena toy izao ny orinasanao SEO, Google dia afaka mamantatra izany. Mamitaka izany ary, amin'ny fotoana maharitra, mety hitarika anao ho voasazy.
Mazava ho azy, misy ny maningana. Raha te-hamorona pejy toerana maro ianao izay misy atiny tsy manam-paharoa sy mifandraika mandritra ny fotoana voafetra mba hampifanaraka ny fiainana ny traikefa, tsy mamitaka izany… izay natao manokana. Ohatra iray ny fitsangatsanganana an-tanàna… izay itovizany ny serivisy, saingy misy fahasamihafana iray taonina amin'ny zavatra niainana ara-jeografika azo zahana amin'ny sary sy ny famaritana.
Fa ahoana ny amin'ny atiny avo roa heny tsy misy kilema?
Raha namoaka fanambarana an-gazety ny orinasanao, ohatra, izay efa nanao fihodinana ary navoaka amina tranonkala marobe, dia mety mbola maniry ny hamoaka azy amin'ny tranokalanao ihany koa ianao. Hitanay izany matetika. Na, raha nanoratra lahatsoratra tamina tranokala lehibe ianao ary naniry ny hamoaka azy indray ho an'ny tranokalanao. Ireto misy fomba fanao tsara indrindra:
kanônika - Ny rohy canonika dia zavatra metadata ao amin'ny pejinao izay milaza amin'i Google fa duplicate ilay pejy ary tokony hijery URL hafa izy ireo raha ny loharanon'ny loharanom-baovao. Raha ao amin'ny WordPress ianao, ohatra, ary maniry ny hanavao ny toerana haleha URL Canonical, azonao atao izany amin'ny Plugin SEO Math Rank. Ampio ao amin'ny kanônika ny URL niaviany ary hanaja ny Google fa tsy dika mitovy ny pejinao ary mendrika ny crédit ny fiaviana. Toa izao izy io:
redirect - Safidy iray hafa ny famerenana fotsiny ny URL iray mankany amin'ilay toerana irinao hamaky ny olona sy hanondro ireo motera fikarohana. Indraindray dia esorintsika amin'ny tranokala ny atiny avo roa heny ary atodinay mankany amin'ny pejy avo indrindra ny pejy ambany rehetra.
Noindex - ny fanamarihana pejy iray mankany amin'ny noindex ary ny fanilihana ireo milina fikarohana dia hahatonga ny motera fikarohana tsy hiraharaha ilay pejy ary hitazona izany tsy ho valin'ny motera fikarohana. Manolo-kevitra ny hanohitra an'io i Google, milaza hoe:
Google dia tsy mamporisika ny fanakanana ny fidirana crawler amin'ny atiny duplicate ao amin'ny tranonkalanao, na amin'ny rakitra robots.txt na fomba hafa.
Raha manana pejy roa mitovy tanteraka aho dia aleoko mampiasa kanônika na famerenana mba handraisana ireo rohy mankany amin'ny pejiko mankany amin'ny pejy tsara indrindra.
Ahoana raha misy mangalatra sy mamerina mamoaka ny atiny?
Izany dia mitranga isam-bolana vitsivitsy miaraka amin'ny tranokalako. Hitako fa miresaka amin'ny rindrambaiko fihainoako aho ary mahita fa misy tranonkala iray hafa mamoaka indray ny atiny ho azy ireo. Tokony hanao zavatra vitsivitsy ianao:
Miezaha hifandray amin'ilay tranokala amin'ny alàlan'ny taratasy fampifandraisana na mailaka ataon'izy ireo ary angataho faesorina eo noho eo.
Raha tsy manana mombamomba ny fifandraisana izy ireo, manaova fizahana Whois ary ampifandraiso amin'ireo contact ao amin'ny firaketana ny fonenany.
Raha manana tsiambaratelo ao amin'ny sehatr'izy ireo izy ireo, mifandraisa amin'ny mpamatsy fampiantranoana azy ireo ary ampahafantaro azy ireo fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao ny mpanjifany.
Raha mbola tsy manara-dalàna izy ireo dia mifandraisa amin'ny mpanao dokam-barotra amin'ny tranokalany ary ampahafantaro azy ireo fa mangalatra atiny izy ireo.
Mametraha fangatahana ao ambanin'ny Daty Laharam-pahamehan'ny Digital Millennium.
Ny SEO dia momba ny mpampiasa fa tsy ny algorithm
Raha ao an-tsainao tsotra izao fa ny SEO dia momba ny traikefan'ny mpampiasa fa tsy ny algorithm tokony hokapohina dia tsotra ny vahaolana. Ny fahazoana ny mpihaino anao, ny fanaingoanao na ny fizarana ny atiny ho an'ny firosoana bebe kokoa sy ny maha-zava-dehibe dia fomba fanao tsara. Ny fanandramana hamitahana algorithma dia mahatsiravina.
Fampahalalana: mpanjifa aho ary mpiara-miasa amin'i Laharana Math.
Tags: Affiliatekanônikapejin-tanànapejy Countyduplicate contentsazy ateraky ny duplicateseo eo an-toeranapejy miorina amin'ny toeranamulti-toeranamultilocationanganonoindexfikarohana biolojikafilaharan'ny fikarohana organikaambonyanaranarobots.txtSEOseo fanao tsara indrindraseo anganomangalatra atiny